मुख्य समाचार Archives - नेपाल आज
मुख्य समाचार	मुख्य समाचार
संखुवासभामा बरुण नदीले अरुण नदी रोकिदियो, ३ किमीको बाँध नै बन्यो
Posted on: April 21, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
वैशाख–८ । बरुण नदीले बगाएर ल्याएको ढुंगा गिटी बालुवाले संखुवासभामा अरुण नदीको बहाव रोकिदिएको छ । जिल्लाको हटियामा पर्ने स्याक्सिला गोलामा अरुण नदी थुनिएको छ । अरुण नदी थुनिएपछि ३ किलोमिटर बाध बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाले जानकारी दिएको छ । बरुण नदीले बगाएर ल्याएको ढुंगा गिटी बालुवाले अरुणलाई छेकेको छ । त्यस क्षेत्रका ८० […]
नेवानीका वरिष्ठ पाइलट ९३ हजार डलरसहित पक्राउ
Posted on: April 10, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
चैत –२८ । नेपाल एयरलाइन्सका वरिष्ठ पाइटल सुवर्ण अवाले ९३ हजार अमेरिकी डलरसहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेका छन् । नेपाल एयरलाइन्सको आरए २२९ जहाजको काठमाडौं– दुबई उडानका लागि उनी विमानस्थल गएका थिए । त्यसक्रममा उनको साथबाट डलर बरामद भएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले अवाले पक्राउ परेको पुष्टि गरे । अवाले पक्राउ परेपछि […]
युवा उमेरमै जेल परेका विवेक, जो पटक–पटक आत्महत्याबाट बचेर समाजसेवामा लागे
Posted on: March 31, 2017April 1, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
करौडौँ डुबाएर जेलपरेपछिको समाजको तिरस्कारदेखि समाजसेवामा लाग्दाको सन्तुष्टीसम्म
Posted on: March 16, 2017March 17, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
चैत–३ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को ज्यादती रोक्न सीमामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । नेपाल भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर खुला सीमा छ । त्यो सीमाको रक्षाका लागि भारतले सीमा क्षेत्रमा आफ्ना ४५ हजार एसएसबी परिचालन गरेको छ । एसएसबीले भारतको सीमा रक्षा गर्ने बहानामा नेपालीमाथि गोली […]
पूर्वमन्त्री ढुंगेल मृत फेला
Posted on: March 16, 2017Posted by: Tirtha Khanal
चैत्र ३ । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व कृषि सहायक मन्त्री रामहरि ढुंगेल मृत अवस्थामा भेटिएका छन् । ढुंगेल दिल्लीबजारस्थित आफ्नै कोठामा मृत भेटिएका हुन् । रामेछापका उनी ग्यास्ट्राइटिस पीडित थिए । सामन्य उपचारका लागि उनी बुधबार साँझ हिमाल अस्पतालमा उपचारका लागि गएका थिए । कोठामा एक्लै बस्दै आएका नेता ढुंगेल मृत भेटिएको खवरपछि नेपाली […]
नेपाल एरलाइन्सको विमानबाट ५ हजार लिटर तेल चुहियो, ठूलो दुर्घटनाबाट बच्यो विमानस्थल
Posted on: March 16, 2017March 16, 2017Posted by: Tirtha Khanal
चैत ३ । मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा गम्भीर दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । एउटा जहाजबाट हजारौं लिटर हवाई इन्धन (तेल) चुहिएपछि विमानस्थल व्यवस्थापनले द्रुत गतिमा काम गर्न सकेका कारण दुर्घटना टरेको हो । नेपाल वायुसेवा निगमको गत सोमबारदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएको एउटा ठूलो जहाज मंगलबार मर्मत गर्ने क्रममा साँझ पौने ७ बजे त्यसबाट पाँच […]
काठमाडौं कसरी भयो धुलमाडौं, यसरी निम्त्याउँछ धुलोले घातक रोगहरु
Posted on: March 12, 2017March 24, 2017Posted by: netra
‘राजधानीमा भइरहेको धुलो र धुवाको मुख्य कारण के त ?’ सबैको उत्तर लगभग एउटै छ –‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार कार्य ।’ तर, यो एउटा कारण मात्र पर्याप्त कारण हैन । यातायात विभाग, सडक विभाग, वातावरण मन्त्रालयलगायतका निकायले जिम्मेवारीपूर्ण काम नगर्दिनाले उपत्यकामा धुलो र धुवा बढेको हो । पुर्वाधार निर्माण कार्य समयमै नसकिदा उपत्यकाबासी प्रदूषित […]
मोर्चाले सरकारलार्इ दिएकाे समर्थन फिर्ता लिने, बल प्रयोग नगर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
Posted on: March 6, 2017March 7, 2017Posted by: netra
फागुन–२३ । राजविराज घटनापछि बसेकाे संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आकस्मिक बैठकले सरकारलार्इ दिएकाे समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे छ । सप्तरीको राजविराजमा प्रहरीको गोली लागि मोर्चाका कार्यकर्ताको मृत्यु भएलगत्तै मोर्चाले अाकस्मिक बैठक बोलाएको थियो । साेमबार साँझ साढे सात बजेबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालको पार्टी कार्यलयमा बसेकाे बैठकले सरकारलार्इ दिदै अाएकाे समर्थन फिर्ता लिने निर्णय […]
अपडेटः सप्तरीमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, एमालेको अभियान तीन दिनका लागि स्थगित
फागुन – २३ । सप्तरीको राजविराजको गजेन्द्रनारायण औद्योगिक क्षेत्रमा एमालेको मेची –महाकाली अभियानको सभालाई विथोल्न आएका मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडपमा मृत्यु संख्या चार पुगको छ । एकजनाको घटनास्थलमै र तीन जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । प्रहरीसँगको झडपका क्रममा रंजन मेहता घटनास्थलमै र दिगम्बर यादव, पिताम्बर मण्डल र आनन्द शाहको उपचारका क्रममा मृत्यु […]
‘चुनाव बिथोल्नु हुँदैन’ भन्ने नयाँ शक्तिका नौ केन्द्रीय सदस्यमाथि बाबुरामको डन्डा !
Posted on: March 3, 2017March 4, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
फागुन २० । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचनका विपक्षमा नयाँ शक्ति नेपालले संघीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिविरुद्ध बोल्ने नयाँ शक्तिका नौ केन्द्रीय सदस्यमाथि कारबाही शुरु भएको छ । चुनावविरोधी निर्णय भएको भन्दै संयोजक बाबुराम भट्टराईविरुद्ध नयाँ शक्तिका नौ केन्द्रीय सदस्यले विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएका थिए । यसरी आपत्ति प्रकट गर्ने […]
देशभरका सोझा नेपाली ठग्ने युनिटीका महाठग, आफ्नै पत्नीको फेला परे
Posted on: February 27, 2017February 28, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
फागुन १६ । दुनियाँको रकम झ्वाम पारी कारागारको सजाय भोगिरहेका युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका सञ्चालक विष्णु क्षेत्रीले आफू पत्नीबाट पीडित भएको गुनासो गरेका छन् । पत्नीका कारण आफू समस्यामा परेको भन्दै उनले कारागारमा केही सञ्चारकर्मीसँग गुनासो गरेका छन् । ठगी काण्डपछि केही समय आफ्नै वकिलको सल्लाहमा फरार भएका क्षेत्री तब फन्दामा परे जब उनले आफै मरेको […]
अनलाइनबाटै खाेज्नुहाेस्, निर्वाचन आयोगले राखेको मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम
Posted on: February 26, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
फागुन १५ । सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोछ । चुनावविरोधी तत्व धेरै सल्बलाएनन् र सरकारले बलियो खुट्टा टेक्यो भने घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सक्छ । यसपटकको निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख जनताले मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउनेछन् । त्यति धेरै एक करोड ४० लाख मतदातामा तपाईको नाम छ कि […]
प्रधानमन्त्रीलाई युवाहरुले मास्क उपहार दिने
Posted on: February 24, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
फागुन १३ । माइतीघरको बाटो हुँदै जाँदा बिहीबार पनि केही विद्यार्थीको जमघट देखियो । त्यसो त माइतीघरमा प्रायःजसो राजनीतिक गतिविधि हुने नै गर्छ । शान्तिको लागि मैनबत्ती बाल्ने कामदेखि नाराबाजी, विरोधसभा आदि पनि हुने गर्छ । बिहीबार पनि त्यँहा त्यस्तै जमघट देखियो । केही युवाहरु मुखमा ‘लेट मी ब्रेथ’ लेखिएको मास्क लगाएर हातमा पर्चासहित बसेका […]
राप्रपाले गरेको फोहोर विवेकशिल नेपालीले सफा गर्यो, रेखा भन्छिन्–‘हामीलाई खबर नै गरेनन् ’
Posted on: February 23, 2017February 25, 2017Posted by: Tirtha Khanal
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता पछिको महाधिवेशन ५ दिनपछि हिजो बुधबार सकियो । महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्ष कमल थापासहित ९८ जना केन्द्रिय सदस्य चयन गर्यो । ५ दिन चलेको महाधिवेशनले गर्दा भृकुटी मण्डप आसपासको क्षेत्रमा फोहोर भयो । प्रचार सामाग्री र पानीको बोतलले फोहोर भएको क्षेत्र राप्रपा नेपालले सफा गरेन । उक्त फोहोर विवेकशिल नेपालीले सफा गरेको […]
प्रभुलाई भेट्न सिमरा जाँदै पूर्वराजा
Posted on: February 15, 2017February 15, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
फागुन ४ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह lबिहीबार दिउँसो दूई बजे पत्नी कोमल र एक सचिवसहित सिमरा जाँदै छन् । सिमरामा उनी केही दिन प्रभु निवासमा बस्नेछन् । पूर्वराजा निकटका अनुशार निजी कामले उनी सिमरा जान लागेका हुन् । सिमरामा पूर्वराजाका पूराना मित्र प्रभु शमशेर राणाको घर छ । उनी केही दिन त्यहीँ बस्नेछन् । सिमरामा […]
कमल थापालाई आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हाने जस्तो
Posted on: February 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
माघ २४ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपासँग एकता गर्ने निर्णय लिए । राप्रपासँगको एकतापछि अझै ठूलो राजनीतिक दलको अध्यक्ष हुने थापाको अभिलाषा थियो । तर २१ माघमा भएको संयुक्त क्षेत्रीय अधिवेशनमा काठमाडौं र झापाबाहेकका जिल्लामा राणा पक्षधर हावी भएपछि थापा तनावमा छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट नौ नौ जना […]
बुहारी हिमानीलाई साथमा लिएर पूर्वराजा अचानक उडे बैंकक
Posted on: February 2, 2017February 4, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
माघ २० । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह बिहीबार साँझ अचानक थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक उडेका छन् । निर्मलनिवास स्रोतले दिएको जानकारीअनुशार शाहको बैंकक यात्रा उनी उडेपछि मात्रै सिमित व्यक्तिहरुलाई थाहा भएको हो । पूर्वराजाको साथमा को को छन् भन्ने खुल्न सकेको छैन । यद्यपि बुहारी हिमानी रहेको स्रोतको दाबी छ । पूर्वराजाको बैंककमा कोसँग भेट हुने भन्ने […]
पानीले निम्त्याउँदै गरेको द्वन्द्व र राष्ट्रसंघमै सुरु भयो बहस
Posted on: February 1, 2017Posted by: netra
माघ – १९ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कमा ३८औँ महासभाबाट पूर्वमहासचिव बान कि मुनबाट महासचिवको बागडोर एन्टोनिओ गुटेरेसले सम्हाल्दै गर्दा एउटा धारणा प्रबलरुपमा अगाडि आएको छः शान्ति र द्वन्द्वको नाजुक परिवर्तन । खासगरी, स्रोतसाधनको भूमिका र मुख्यगरी जलस्रोतले उचित मान्यता प्राप्त गर्दैछ । यो लामो समयदेखि बहसको विषय रहँदै आएको छ । बान कि मुन र […]
कञ्चन शर्मा भन्छिन्, ‘मलाई १० लाख चाहिँदैन, मोहनले गाँस, बासको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ’
Posted on: January 29, 2017January 31, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
माघ १६ । केही महिनाअघि सामाजिक सञ्जालमा ‘कञ्चन शर्मा प्रकरण’ले व्यापक चर्चा बटुलेको थियो । कञ्चनको कथा तरकारीवाली र चियावाला झै हावासरी फैलियो । कञ्चनको प्रशंग आयो, गयो । विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला उनका पूर्वपति मोहन रेग्मीले भनेका थिए, ‘बाध्यता त छैन तर उनलाई १० लाख रुपैयाँ दिएर सुखी जीवनको कामना गर्न सक्छु ।’ यति […]
स्वदेशी नांगा साबुनविरुद्ध धावा बोल्ने भारतको युनिलिभर रहेछ
Posted on: January 28, 2017January 29, 2017Posted by: Bishow Rimal
माघ १४ । खोलबिनाका साबुनले जनस्वास्थ्यमा हानी पुग्छ भन्दै पत्रिकामा फुल पेज विज्ञापन दिने कम्पनी भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर रहेको खुलासा भएको छ । हालै युनिलिभरको तर्फबाट भारत केन्द्र रहेको बहुराष्ट्रिय विज्ञापन एजेन्सी थम्पसनको नेपाली शाखा थम्पसन नेपाल प्रालीले प्रकाशन गर्न लगाएको यस क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् । खोलबिनाको साबन उत्पादन गर्ने हिमगिरी सोप एन्ड […]
पूर्वलडाकूलार्इ दैनिकी चलाउनै धौ-धौ
Posted on: January 25, 2017Posted by: netra
माघ – १२ । कुनै बेला देश परिवर्तनका लागि सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएकी बैतडीकी एक पूर्व लडाकूलाई अहिले दैनिकी चलाउन धौ धौ भएको छ। कक्षा ६ मा पढ्नेक्रममा विद्यालयबाटै आफू माओवादी अभियानमा लागेर भूमिगत भए, माओवादीका पूर्व लडाकु भगवतीले सार्कीले भनिन् – ‘पढ्ने बेलामा पढ्न पाइएन, नपढेपछि कहाँबाट रोजगार पाउनु, अहिले हातमुख जोर्न पनि धौ धौ […]
राष्ट्रपतिको शपथ लिनै लाग्दा ट्रम्पलाई आपत, यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्धा दायर
Posted on: January 18, 2017January 18, 2017Posted by: Tirtha Khanal
माघ ५ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प शपथ ग्रहणको दिन नजिकिँदै जाँदा यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्धा खेप्नु परेको छ । ट्रम्पले आफूमाथि यौन दुरव्यहार गरेको भन्दै बाहिर आएका धेरै महिला मध्ये एक ४१ वर्षकी समर जर्वासले ट्रम्प विरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर गरेकी छन् । रियालिटी सोकी पूर्व सहभागी जर्वासले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूमाथि यौन […]
जाडोमा बढ्छ दम, यसको उपचार कसरी गर्ने
Posted on: January 16, 2017Posted by: Tirtha Khanal
सामान्य भाषामा स्वाँस्वाँ आउनुलाई दम भनिन्छ । तर, दौडिदा, उफ्रदा, खेल्दा र लामो यात्रामा हिँड्दा हुने स्वाँस्वाँलाई भने दम भन्न मिल्दैन । यसलाई शरीरले पचाउन सक्ने र बिस्तारै सामान्य अवस्थामा आउने भएको कारण दम भन्न मिल्दैन । दम मुख्यतया फोक्सोको रोगका कारणले हुन्छ । यसको साथसाथै मुटु, मिर्गौला र कलेजोलगायत रोगको कारणले पनि दम हुन […]
वैदेशिक रोजगारीमा मेडिकल शुल्क बढाउन सरकार मानेन, व्यवसायीले रोके काम
Posted on: January 15, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
माघ २ । साउदी अरब, बहराइन र ओमनमा काम गर्न जाने कामदारको मेडिकल जाँच रोकिएको एक महिना बित्न लागेको छ । यसबाट विदेश जाने तयारीमा रहेका झण्डै झण्डै १२ हजारभन्दा बढी कामदारको भिसा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । उनीहरुको भिसा आवेदन गर्ने प्रक्रिया समेत रोकिएको छ । यसैका कारण नेपालका लागि आएका डिमान्ड पनि अन्य […]
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा मुसहर बस्तीको शिलान्यास [फाेटाेफिचर]
Posted on: January 9, 2017Posted by: netra
पुस – २५ । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले तेस्रो एकीकृत नमुना बस्तीको शिलान्यास गरेको छ । फाउन्डेसनले सोमबार भव्य समारोहकाबीच महोत्तरी, बर्दिवास नगरपालिका–२ स्थित मुसहर बस्तीमा नमुना बस्तीको शिलान्यास गरेको हो । हास्य कलाकारद्वय हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठ (मह जोडी) र गंगासागर सरसफाईका अभियन्ता रामअशिष यादवले संयुक्त रूपमा बस्तीको शिलान्यास गरेका हुन् । बस्ती शिलान्यासका लागि […]
‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३’ स्वीकृत
पुस – २५ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको दोस्रो बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । यसअघिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । आधा घन्टाको स्थगनपछि बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका […]
विशेष समय : स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन ध्यानाकर्षण
पुस – २५ । व्यवस्थापिका–संसद्को साेमबारको बैठकमा विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न, भूकम्पपीडितलाई पुनः वासको उचित व्यवस्था गर्न र सडक विस्तारका क्रममा उचित मुआब्जा दिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पेस भइसकेकाले सबै दल मिलेर स्थानीय निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई केन्द्रित गराउन आग्रह गरे । […]
संशोधन प्रस्ताव पारित गराएरै छाड्ने सभापति देउवाकाे दाबी
पुस – २३ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन प्रक्रिया एमालेको अलोकतान्त्रिक चरित्रका कारण अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस काभ्रे–१ अन्तर्गत कोसीपारिका नौ गाविसले शनिबार आयोजना गरेको विशाल आमसभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानप्रति मधेसी समुदायको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव एमालेले संसद् अवरुद्ध […]
संविधान संशोधन विधेयकः टेबलको तयारी, तत्काल सहमतिको सम्भावना क्षीण
पुस – २३ । व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएसँगै उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख दलले वार्ता र संवादलाई अझै थप घनिभूत तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट संविधान सशोधन विधेयकमाथि भएको फैसलालाई प्रमुख राजनीतिक दलले समग्रमा स्वागत गरेपनि आफू अनुकूलको व्याख्या र विश्लेषणले समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ राखेको हुँदा विश्वास बढाउन र सहमति […]
बजेट अभावले इलाम बसपार्क निर्माणमा ढिलाइ
पुस – २३ । इलाम सदरमुकाममा व्यवस्थित बसपार्क निर्माण सुरू भएको पाँचवर्ष बितिसक्दा पनि अझै पूरा हुनसकेको छैन् । ट्राफिक जाम व्यवस्थापनसँगै यात्रु र स्थानीयवासीलाई सहज हुने ठानिएको बसपार्क निर्माण थालिए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा सुस्तगतिमा मात्र काम भएको छ । आव २०६८/६९ मा नै निर्माण सुरू भए पनि अपेक्षित बजेट नहुँदा काम ढिलो […]
कार्कीको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा, सुनुवाइ आइतबार पनि हुने
Posted on: January 6, 2017January 7, 2017Posted by: netra
पुस – २३। काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्वित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा बहस हुँदै आएको सो मुद्दामा आज कार्की पक्षका कानुनी व्यवसायीले बहस गरेका हुन् । कार्कीका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, कृष्ण सापकोटा, अधिवक्ता दीपेन्द्र […]
प्राकृतिक बासस्थान मिचिएर हात्ती आतङ्क बढ्यो, अारक्ष कर्मचारीलार्इ समेत ज्यान जाेगाउन हम्मेहम्मे Posted on: January 6, 2017Posted by: netra
पुस – २२ । कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका नायब सुब्बा सुरेन्द्र खड्कालाई कार्यालयको कामकाज फत्ते गर्नेभन्दा पनि कार्यालयबाट निस्कन हतार हुन्छ । उनी कार्यालयको कामकाज गर्नबाट पन्छिन खोजेका भने होइन । गत दसैँयता खड्कालाई दिउँसै कार्यालय छाड्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । जङ्गली हात्तीले दिउँसै आरक्षमा आएर आक्रमण गर्न थालेका कारण खड्कालगायत कर्मचारीले हात्तीबाट जोगिन दिउँसै […]
पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहलाई ‘दाइजो’ दिइएको जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुने सर्वोच्चको फैसला
Posted on: January 5, 2017January 5, 2017Posted by: netra
पुस – २१ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई दाइजोस्वरूप दिइएको काठमाडौं छाउनीमा रहेको १५ रोपनी एक आना जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा हुने फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की तथा सपना मल्ल प्रधानको इजलासले विहीबार प्रेरणा शाहको नाममा रहेको उक्त सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टकै नाममा गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता […]
विद्युतीकरणबिना समाजवादको विकास असम्भव–ऊर्जामन्त्री शर्मा
Posted on: January 5, 2017Posted by: netra
पुस – २१ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत् सुविधा उपभोग गर्न पाउनु जनताको अधिकार भएकाले त्यसको सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ र आइसेट नेपाल नामक संस्थाले बिहीबार आयोजना गरेको ‘पुनःनिर्माणमा सामुदायिक संस्थाको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा उनले भने – ‘राष्ट्रको विकासका लागि विद्युत् अपरिहार्य रहेको छ ।’ मन्त्री […]
समाचार प्रभावः खानेपानी चुहावट रोक्न प्रधानमन्त्रीकाे १७ बुँदे लिखित निर्देशन
Posted on: January 5, 2017January 6, 2017Posted by: netra
पुस – २१ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपत्यकाको खानेपानी चुहावट रोक्न सरोकारवाला निकायका प्रमुखलाई १७ बुँदे लिखित निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित बैठकमा उनले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई बाँकी बक्यौता तत्काल उठाउन र चुहावटलाई ४० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। खानेपानी तथा […]
त्रिपक्षीय वैठक : संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइने
पुस – २१। नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार भएको त्रिपक्षीय बैठकमा यही पुस २४ गते आइतबार बस्ने व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्ने […]
राष्ट्रिपतिले शितल निवास बाेलाइन् पाँच दलका शीर्ष नेतालाई
पुस – २१ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख पाँच दलका शीर्ष नेतालाई छलफलकालागि शितल निवास बोलाएकी छन् । मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध लम्बिएपछि छलफल गर्न राष्ट्रपतिले पाँच दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएकी हुन् । अाज (बिहीबार) बेलकी पाँच बजेबाट शितल निवासमा पछिल्ले राजनीतिक अवस्थाको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ । राष्ट्रपतिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय […]
वन्यजन्तु संरक्षणमा बर्दियाका युवाको उदाहरणीय काम
खाता क्षेत्र जैविक मार्ग, हरियाली बनाऔँ है, वन्यजन्तु हिँड्ने बाटोमा बाधा नपुर्याऔँ है, इन्डियाको बघिनी नेपालमा आउने, नेपालको बाघसँग मायाप्रीति लाउने । उनीहरूको मायाप्रीति नछुटाऊँ है, वन्यजन्तु हिँड्ने बाटोमा बाधा नपुर्याऊँ है..! पुस – २१ । बर्दिया खाता जैविक मार्गका भदयी थारुले वन्यजन्तु संरक्षणमा लागेका युवालाई उत्साहित गर्न गाउने गीत हो यो । चाहनाको आँकलन गर्न […]
कसरी भयो जनक शिक्षामा झन्डै दुई अर्ब घाटा ?
Posted on: January 4, 2017Posted by: netra
पुस – २० । उही मूल्यका पाठ्यपुस्तक बिक्रीबाट निजी क्षेत्र नाफामा जान सक्छ भने स्रोतसाधनयुक्त सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड बर्सेनि किन घाटामा जान्छ ? शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रका मात्र होइन निजी प्रकाशक र मुद्रकले पनि यो प्रश्न उठाउन थालेका छन् । एकातिर विद्यार्थीले समयमा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक नपाउने अर्काेतिर सोही तहका पाठ्यपुस्तक […]
लोकप्रिय समाचार ताजा खबर	एनटीसीका सबै सेवा एउटै काउन्टरबाट, कार्यालयभित्र फेसबुक प्रतिबन्ध